Video: Shabaab oo Afar Sano kadib sheegtay inay fuliyeen weerarkii Westgate (Akhriso Tirada dagaalyahanada) | Entertainment and News Site
Home » News » xogwaran » Video: Shabaab oo Afar Sano kadib sheegtay inay fuliyeen weerarkii Westgate (Akhriso Tirada dagaalyahanada)
Video: Shabaab oo Afar Sano kadib sheegtay inay fuliyeen weerarkii Westgate (Akhriso Tirada dagaalyahanada)
daajis.com:- 21-kii September 2013-kii Afar sano ka hor maanta oo kale waxaa dhacay weerarkii lagu qaaday xarunta Ganacsiga Westgate Mall ee magaalada Nairobi dalka Kenya.
Weerarkaas oo Shabaab ay ka dambeeyeen wuxuu ahaa midkii ugu khasaaraha badnaa ee lagu qaado Kenya tan iyo wixii ka dambeeyay sanaddii 1998 xilligaas oo uu dhacay weerarkii lagu qaaday safaaradda Mareykanka ee magaalada Nairobi.
Shabaab oo weerarkan si faah faahsan uga hadlay ayaa waxa ay sheegeen in uu jawaab u ahaa Ciidamada Kenya ee ku sugan gudaha Soomaaliya, qeybna ka ah AMISOM, kuwaasi oo Soomaaliya yimid 2011-kii.
Xarakada Al-Shabaab ayaa markii u horeysay sheegtay in weerarkii sanadkii 2013 lagu qaaday xarunta ganacsiga ee Westgate Mall ay fuliyeen afar dagaalyahan , iyadoo horay warbaahinta Kenya ay si iskhilaafsan uga hadleen tirada rasmiga ah ee fulisay weerarkaas oo mas’uuliyiinta qaar ku sheegayeen in 15 qof ay fuliyeen.
Inkastoo Shabaabka ay shaaciyeen tirada raggii fuliyay weerarkii Westgate, hadana ma aysan soo bandhigan magacyada ragga weerarka geystay iyo wadamada ay u kala dhasheen iyo haddii ay nool yihiin intaba